‘नेपाल–भारत सम्बन्धमा पटक-पटक समस्या नआओस् भनेर मोदीजी चिन्तित हुनुहुन्छ’ - अन्तर्वार्ता - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
‘नेपाल–भारत सम्बन्धमा पटक-पटक समस्या नआओस् भनेर मोदीजी चिन्तित हुनुहुन्छ’
परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण भन्छन् - 'काठमाडौंसम्म रेल जोड्ने कुरामा एकप्रकारले सहमति भइसकेको छ'
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को औपचारिक भारत भ्रमणमा साथसाथै छन् परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत। महत्वपूर्ण भेटघाटहरुमा प्रधानमन्त्रीसँगै रहेका मन्त्री महतसँग शुक्रबार राती नेपालखबरका चन्द्रलाल गिरिले दिल्लीमा गरेको वार्ताको सम्पादित अंश :
समग्रमा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमण कस्तोर रह्यो?
नेपाल र भारतको बीचमा जुन विश्वासको संकट देखापरेको थियो, त्यसलाई चिर्न यो भ्रममणले विश्वासको आधार तयार पारेको छ। विश्वासको आधार तय भइसकेपछि मात्र अरु सम्बन्धहरु मजबुद्ध हुँदै जान्छन्। दोस्रो कुरा, विगतमा धेरै सम्झौताहरु भए। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दुई देशका मन्त्रालयस्तीय मेकानिजमलाई क्रियाशिल बनाएर सम्झौता–सहमतिलाई लागू गर्ने कुरा भएको छ। यो महत्वपूर्ण पाटो हो। जति पनि आयोजनामा सम्झौताहरु भएका छन्, तिनलाई एउटा समय सीमाभित्र कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ।
यसपटक चाहीँ सम्झौता सहमति के के भए?
मधेस–तराईमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउने विषयमा कुरा अगाडि बढेको छ। यद्यपी यसबारे अझै ठोस हुन बाँकी नै किन नहोस्। यसको लागत कति हुन्छ भन्ने कुरा अध्ययन हुन बाँकी नै छ तर हामीले जग्गा क्लियर गरेपछि भारतले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सकेको छ। काठमाडौंसम्म रेल जोड्ने कुरामा एकप्रकारले सहमति भइसकेको छ।
गोरखपुर–बुटवल र मुजफरपुर–ढल्केबर विद्युत सब ट्रान्समिसन लाईन अगाडि बढाउने कुरा भइसकेको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्न भारतले उपलब्ध गराउने भनेको सहुलियत ऋणमा भारतीय सामान नै ल्याउनुपर्ने जुन शर्त थियो, त्यसलाई कम गर्न भारत राजी भएको छ। सीमा, डुबान, सिंचाईजस्ता समस्याहरु हल गर्न दुई पक्षीय संयन्त्र बनाएर काम गर्ने सहमति भएको छ।
हुलाकी राजमार्गको दुई चरण मध्ये पहिलो चरणमा भारतले सहयोग गर्ने सहमति भइसकेको थियो। त्यसलाई लागू गर्ने र दोस्रो चरणमा पनि थप सहयोग गर्न भारत तयार भएको छ। यी लगायत अन्य धेरै विषयमा सहमति–समझदारी बनेका छन्।
खासै नयाँ कुरा त आएन, पुरानै विषयमा मात्र छलफल भएछ होइन?
मूल कुरा त भएको सहमति–समझदारीलाई कार्यान्यन गर्ने हो। थप नयाँ सहमति गर्नुभन्दा पहिला भएका सहमति लागू गरेपछि मात्र विश्वासको वातवरण बन्दै जान्छ। काम गर्नलाई नै सहमति गरेको रहेछ भन्ने पनि हुन्छ। लागू नहुने अवस्थामा सहमति गरेर मात्र के गर्नु। सहमति–समझदारी गर्ने तर लागू नगर्दा जनतामा यति धेरै नकरात्मक धाराणा बन्दै आएको छ। त्यसैले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जुटेको सहमति एकदमै महत्वपूर्ण पक्ष हो।
नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै भारत भ्रमण गर्ने प्रचलन नै बनिसक्यो। सरकार बनेको एक महिनाभित्रै विशेषदूत पठाएर दिल्ली भ्रमण गर्नु पर्ने अवस्था थियो?
यो नयाँ सरकारले भारतसँग सम्बन्ध सहज बनाएर जान जरुरी थियो, छ। दुई देशका बीचमा सधैँ सम्बन्धमा तिक्तता राखेर जान सक्ने अवस्था थिएन। खुला सीमा जोडिएका दुई मुलुकको सम्बन्धमा सधैँ दरार देखा पर्नु उपयुक्त हुँदैन। भारतसँग हाम्रो विभिन्न आयामयुक्त सम्बन्धहरु इतिहासदेखि नै रहंदै आएका छन्। दुवै देशमा विश्वासको वातवरण बनाएर आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न जरुरी छ। फेरि भ्रमणले राजनीतिक क्षेत्रमा निरन्तर छलफल र वार्ता भइरहने वातवरण पनि तय गर्छ। दुवै देशका नेताहरुले उच्चस्तरीय भ्रमण गर्ने समझदारी पनि भएको छ। आगामी अक्टोबरसम्म भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण हुने तयारी हुँदैछ।
नयाँ सरकार बनेपनि भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागतसम्म गरेन, अनि सम्बन्ध कसरी विश्वासमा परिणत भयो भन्ने?
संविधानको विषय हाम्रो आन्तरिक विषय हो। भारतीय नेताहरुले नेपाललाई संविधानमा संसोधन गरेर सबै क्षेत्र र समूदायलाई समेटेर लैजान पहिलादेखि नै सुझाव दिंदै आउनु भएको हो। खुल्ला सीमा जोडिएको छिमेकमा के हुँदैछ, त्यसले सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने भारतीय चासोलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ। हामीले संविधान संसोधनको प्रक्रिया आन्तरिक रुपमा अगाडि बढाएका छौं। त्यसमा प्रधानमन्त्री मोदीले तपाईंहरुले गर्नुभएको थालनीमा समर्थन छ भन्नु भएको छ। संविधानको विषयमा अरु खासै चासो भारतीय नेताहरुको छैन्।
उसो भए भारतले नेपालको संविधानलाई किन स्वागत गर्न नचाहेको हो?
यो तपाईंहरुको आन्तरिक विषय हो। तपाईंहरु नै जे गर्दै हुनुहुन्छ गर्नु होला। हाम्रो त्यस्तो कुनै टिप्पणी छैन भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो। यो त एकप्रकारले संविधान स्वीकार गरेको जस्तै हो। छिमेकीको नाताले हामीले नेपालको संविधान कार्यान्वयन गरेर राजनीतिक स्थायीत्व दिन संविधान संसोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गरेको कुरा जानकारी गरायौं। उहाँहरुले आन्तरिक कुरा आफैले मिलेर हल गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर प्रष्टसँग सुझाव दिनुभएको छ। संविधानलाई ‘रिकोनाइज’ गरेका छौं भन्नु भएको छ। त्यसैले स्वागत भन्ने शब्द नै किन चाहियो र? यो पटक–पटक भन्नु पर्ने विषय पनि होइन्। संविधान संसोधन गर्ने प्रयास त हामी आफैले थालेको प्रक्रिया हो। भारत सरकारले भनेर होइन।
नेपालमा भारत सरकारको मुख्य चासोको विषय चाहीँ के रहेछ?
नेपाल र भारतका बीचमा यसरी पटक–पटक समस्या नआओस् भन्ने छ। नेपालको राजनीतिक स्थायीत्व र विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मोदीजी आफै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। विगतमा भएका सहमतिलाई एउटा समयसीमाभित्र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतिर मोदीजीको चासो थियो। हामीले बाढी, डुबान, सीमा अपराधजस्ता विषयहरु उठाएका थियौं। यी समस्या हल गर्न एउटा संयुक्त मेकानिजम बनाऔं भन्ने हाम्रो प्रस्तावमा उहाँहरु अत्यान्तै सकरात्मक हुनुहुन्छ।
प्रकाशित ३१ भदौ २०७३, शुक्रबार | 2016-09-16 23:52:32